Ukhuphelo lwe-Apk ye-Indriver ye-Android [usetyenziso lwamva nje]-Luso Gamer
Khuphela i-Apk ye-Indriver ye-Android [usetyenziso lwamva nje]
Nangona uninzi lwezicelo zothutho lwe-intanethi ezahlukeneyo zifikeleleka njenge-Careem kunye ne-Uber njl. Oku kuthetha ukuba abakhweli abanako ukulungisa okanye ukuthengiselana ngeemali zokukhwela. Ngaloo ndlela siqwalasela intuthuzelo yabasebenzisi sibonisa i-Indriver Apk.
Ukukhuphela ifayile yesicelo ngaphakathi kwe-smartphone ye-android kuya kuvumela abasebenzisi. Ukuvelisa amaxabiso amahle okukhwela kwi-intanethi. Ngenxa yokhetho lwebargain, abasebenzisi abaninzi bathanda ukukhwela ngeqonga le-indriver.
Iqonga lithathwa njengexabiso eliphantsi kwaye lisebenziseka ngakumbi xa lithelekiswa namanye amaqonga afikelelekayo. Xa sithetha ngenkqubo yofakelo kunye nokusetyenziswa ke ilula. Khuphela nje inguqulelo yamva nje ye-Indriver App kwaye ngokulula wenze ukukhwela okuninzi ngaxeshanye.
Yintoni i-Indriver Apk.
I-Indriver Apk ihlelwe ngokweemephu kunye nodidi lokuHamba. Nangona kunjalo, isicelo sijolise ngokwenene kwabo bafuna ukukhwela okukhawulezayo nokulula. Ukwenza inkqubo yokukhetha kunye nokulahla ichanekile, iGPS ekwi-intanethi yongezwa.
Ngoku usebenzisa inkqubo yokulandelela echanekileyo yeGPS, abaqhubi bayakwazi ukukhetha nokulahla iindlela ezininzi zokukhwela simahla. Xa sithelekisa usetyenziso kunye namanye amaqonga afikelelekayo. Emva koko sifumene esi sicelo sokukhwela sisebenza ngakumbi kwaye sisebenziseka ngokulula.
Kuba umphathi kunye nabakhweli bayibambe ngokupheleleyo inkqubo yokubhukisha. Ngoku ixabiso alinakuze lilawulwe yinkqubo ye-AI yomntu wesithathu. Abaqhubi banikwe igunya lokugqiba ngobulungisa. Masithi ukuba umqhubi akalunganga ngexabiso elinikiweyo ngoko unokulurhoxisa ngokukhawuleza uhambo.
Okufanayo kuhamba nomkhweli kwaye nabakhweli banikwe ukhetho lokuthethathethana ngamaxabiso. Masithi umkhweli akakhululekanga ngeendleko zomkhweli. Emva koko unokufaka isicelo se-bargain ngokulula kwaye aphinde athathele ingqalelo amaxabiso. Ke uyawathanda amanqaku emva koko ufake i-Indriver Download.
ubungakanani 50 MB
umbhekisi ® I-SUOL INNOVATIONS LTD
Igama lepakheji sinet.startup.inDriver
Iyafuneka i-Android 6.0 kunye noHlanganiso
udidi apps - Maps & Ukuhamba
Ngaphandle kokhetho oluneenkcukacha lwe-bargain, isicelo sikwaxhasa amaxabiso aNgafihliyo, uKhetho loMqhubi, iiProtocol zoKhuseleko, uLungiselelo loMkhweli, uMvuzo weBhonasi, iindlela eziHlaziyiweyo ze-Intercity, abaLawuli abanzima kunye nokuhanjiswa kweCourier ngokukhawuleza njl.
Sele sixoxe ngenkqubo yohlengahlengiso lwemali yokukhwela kunye nokukhethwa komqhubi. Ngaphezulu kwesikrini esiphathwayo, uluhlu lwabaqhubi abakufutshane abakhoyo luya kuvela kunye neethegi zamaxabiso amathathu angcono. Ukuba umntu ukhululekile kunye nawuphi na umqhubi ofikelelekayo.
Emva koko khetha igama lokuqhuba ngexabiso kwaye wenze uhambo olunempumelelo olucacileyo. Khumbula ukuba abaphuhlisi baqinisekisa ukuba Abaqhubi kunye nokhuseleko lwabathengi. Kwanenkqubo yesikhalazo sobomi yongezwa ukuze kuthathwe amanyathelo akhawulezileyo.
Ukuba umntu akakhululekanga ngentengiselwano kunye nokuziphatha komqhubi. Emva koko unokulahla ngokulula kwaye enze ngokwezifiso umqhubi. Ngaphaya koko, ukuba umqhubi uphumelele ekufikeleleni kwiithagethi ngaphambi kweeyure ezibekiweyo uya kunikwa iibhonasi.
Inkqubo yokulandelela i-GPS ehlaziyiweyo yongezwa ukwenza inkqubo yokuthutha ikhuseleke kwaye igudileyo. Imigca yendlela iya kuhlaziywa rhoqo kwaye i-AI tracker ephuculweyo iya kubonelela ngeyona ndlela ilungileyo. Ukuba zonke ezi zikhetho zikhankanywe emva koko ukhuphele i-Indriver Android.
Ukufakela i-app kuya kukunika uhambo olukhawulezayo nolukhawulezayo.
Nokuba i-GPS tracker ephezulu iya kunceda ukunika indlela echanekileyo.
Ukhetho lwesiko lwabaqhubi luyafumaneka.
Amaxabiso angafihliyo kunye nenkqubo yentlawulo yongezwa.
Ii-loaders ezinzima ezahlukeneyo ziyafumaneka ukuze zibhukishe.
Eyona nkqubo yokuhanjiswa ngokukhawuleza iyafumaneka.
Ukuya kuthi ga kwi-20 kg ipakethe iya kusiwa.
Ubhaliso luthathwa njengesinyanzelo.
I-app interface ilula.
Uyikhuphela njani i-Indriver Apk
Inguqulelo yamva nje yesicelo iyafikeleleka ukuba ikhutshelwe kwiVenkile yoDlalo. Kodwa xa kufikwa kufikeleleko ke kunokufuna iimvume ezithile kunye nokufaneleka. Kuphela zii-smartphones ezifanelekileyo ezivumelekileyo ukukhuphela usetyenziso.
Abo basebenzisi be-Android bafuna umthombo we-intanethi yomntu wesithathu. Oko kuvumela abasebenzisi ukuba bakhuphele ifayile ye-apk ehlaziyiweyo ngaphandle kwemvume. Emva koko sicebisa abo baqhubi beselula ukuba bandwendwele iwebhusayithi yethu.
Emva kokufaka isicelo kwii-smartphones ezahlukeneyo, asikwazi ukubona nayiphi na ingxaki enzulu ngaphakathi. Inkqubo yokufaka kunye nokusetyenziswa kwesicelo ilula kakhulu. Khuphela nje ifayile ye-app kwaye ujabulele ukukhwela okukhuselekileyo okuphindaphindiweyo.
Ukuba ukhangela ezona izicelo zothutho ezizezinye kwi-intanethi. Emva koko sicebisa abo basebenzisi beselula bafakele ezi apps zilandelayo zikhoyo apha. Ezizi I-APK yeCoyote kwaye I-NAVIC App usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows.
Yiyo loo nto udiniwe ngamaxabiso aphezulu kwaye ukhangela enye indawo. Oko kuvumela abakhweli ukuba bakhethe ukukhwela ekuhleni okufikelelekayo ngamaxabiso okukhwela. Emva koko ukhuphele kwaye ufake i-Indriver Apk efikelelekayo ukufikelela apha.
iindidi Maps & Ukuhamba, apps tags Indriver Android, Umqhubi we-Apk, I-Indriver App, Khuphela umqhubi Post yokukhangela
Ukhuphelo lweDrama ye-Apk ye-Android [usetyenziso]